K Afrika ma ka qayb gelaysaa AMISOM? - BBC News Somali
K Afrika ma ka qayb gelaysaa AMISOM?
22 Agoosto 2010
Walaac weyn ayaa laga qabaa in Koonfur Afrika ay ku gacansaydho codsigii Ururka Midowga Afrika ee ahaa inay ka qayb gasho ciidamaa nabad-ilaalinta ee Somalia
Sida ay sheegtay wakaaladda IRIN ee wararka u qaabilsan Qaramada Midoobey, waxa dib u dhacay kulan golaha wasiirada ee dawladda Koonfur Afrika la filayey inay ka yeeshaan bishan 18-dii, oo ay go'aan kaga gaadhaan codsigii hore ee Ururka Midowga Afria ugu gudbiyey bishii July. Waxana ugu wacan mudaharaadyada shaqa-joojinta ah ee ballaadahn, ee ay ku kaceen shaqaalaha dawladda ee Koonfur Afrika, kaasi oo dhaliyey in heegan laga dhigo ciidamada dawladda si ay u qabtaan adeegyada muhimka ah.
In la kordhiyo tirada ciidmada AMISOM ma noqon karto kelideed xal. Waxa loo baahan yahay xalkii siyaasadeed ee haki lahaa
Henri Boshoff, Peace Missions Programme, Pretoria Institute for Security Studies
Dhinaca kalena, machadka baadhitaanka arrimaha nabadgelyada iyo deganaanshaha ee ku yaaal magaalada Pretoria, waxa u sheegay inayna jirin istraatijiyadii siyaasadeed ee lagu xallin lahaa khilaafaadka Somalia, sidaasi awgeedna in aanay xal noqon karayn oo keliya ciidamo dheeraad ah oo la geeyo gobolkaasi.Daraasaddani machadka Pretoria, waxay xaaladda Somalia barbar dhigaysaa tan ka taagan Afghanistan, oo in kasta oo si weyn loo kordhiyey ciidamadaii NATO iyo Maraykan, in haddana taasi aanayna keeni xala milateri iyo mid siyaasadeed midna.
Waxa kale oo Koonfur Afrika ay rumaysan tahay in ciidamo dheeraad ahi ay sii shidi karaan uun dagaallada iyo khilaafyada Somalia.
Koonfur Afrika, hore waxay uga cudurdaaratay inay qayb ka noqoto ciidamada AMISOM, sababta oo ah ciidamadeeda oo ku kala hawllanaa nabad-ilaalina gobollo kale, laakiin bishii aynnu soo dhaafnay ee July ayaa Ururka Midowga Afrika uu ka codsaday ciidamo dheeraad ah oo la geeyo Somalia, dalal ay ka mid yihiin Koonfur Afrika, Angola, Nigeria, Ghana iyo Guinea. IIaa haddaa dalalka Djibouti iyo Guinea oo qudha ayaa sameeyey ballanqaadyo rasmi ah.
Dhibaatada Somalia waa mid siyaasadeed. Ma aha xal milateri oo qudha
Mait Nkoana-Mashabane, SA minister for International Relations and Cooperation
Jawaabtii ugu horraysay ee codsigaasi ku saabsanayd ee Koonfur Afrikana waxay ahayd hadal ka soo baxay wasiirka iskaashiga caalamiga ah, Mait Nkoana-Mashabane, oo waqtigaas sheegay in dhibaatada Somalia aan wax lagaga qaban karayn oo keliya xal milateri, haddii aan la helin straatijiyadii syaasadeed.